Eyona Jenereji yasimahla yeBucks yasimahla ayikho 2022 yokuqinisekiswa kwabantu
I-Fortnite i-Akhawunti ye-2022: Ungazifumana njani ii-Free Skins & Pass Pass eFortnite?
Le yi-2022, kwaye akukho nakuphi na ukusebenza I-Fortnite V Bucks generator azikho izixhobo zovavanyo phaya. Ewe kunjalo, oku kuvakala kulusizi. Kodwa emva koko, inyani yomcimbi kukuba akukho lula ukwenza i-generator enjalo. Kuthatha ubuchwephesha obuninzi, umzamo, kwaye kunjalo, inkanuko yokwakha i-generator yolu hlobo. Kwaye, ukuyigcina isebenza ngalo lonke ixesha lelinye ibali iyodwa ngenxa yobunzima obabandakanyekileyo. Isizathu sokuba esi sixhobo sisebenze ixesha elide kungenxa yohlaziyo olungayekiyo. Abaqulunqi balo mvelisi abashiyanga nyani litye engatyhilelwanga ukugcina esi sixhobo sisebenza ngawo onke amaxesha, okumangalisa ngokwenene. Ngokucacileyo, abadali bale nto simahla i-B Bucks akukho mntu uqinisekisiweyo Isixhobo sifanelwe kukuqathelwa kumqolo wabo. Ukuba unayo nayiphi na injongo yokusebenzisa i-Fortnite V Bucks generator, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka usenzele esi sixhobo ngaphandle kwamathandabuzo. Ngokwenyani awunayo into yokulahleka ngokuthatha ngokutsiba okholo kule jini yasimahla ye-V Bucks. Ngapha koko, ayibonakali ngathi le jenreyitha iya kufa nangaliphi na ixesha kungekudala.